သမိုင်းနှင့်လူမှုရေးဘာသာရပ်များကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ပထမနှစ်အဖြစ် စတင်တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသည့် ဝေးလံခေါင်သီသည့် ကျေးလက်ဒေသမှ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် ရန်ကုန်မြို့ရှိ နော်ဝေနိုင်ငံသံရုံးနှင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကာ ပညာသင်ဆု (၁၀) ဆု ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။
ထောက်ပံကာလအနေဖြင့် ၂၀၁၈-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်များ၏ တက္ကသိုလ်ပထမဘွဲ့ (Bachelor Degree) အတွက် တနှစ်လျှင် (၁၀) လ ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
လျှောက်လွှာများကို (၃-၁၂-၂၀၁၈) ရက်နေ့မှ (၃၁-၁-၂၀၁၈) အတွင်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားရေးရာဌာနတွင် ရယူလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များပိုမိုသိရှိလိုပါက ဦးအောင်စိုး၊ လက်ထောက်မော်ကွန်းထိန်း၊ သင်တန်းရေးရာဌာန၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထံ စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
ရုံးဖုန်းနံပါတ် +၉၅ (၁) ၅၃၄၃၉၀
David Taw Scholarship Announcement 2018
The Norwegian embassy in Yangon, in collaboration with the University of Yangon, is proud to announce the third time grant for the 10 Bachelor’s scholarships to study at the University of Yangon in the fields of history and humanities.
His Majesty, the King Harald V of Norway during his state visit in Myanmar in early December 2014 announced the establishment of Norwegian scholarship fund to provide the opportunity for selected students from different remote states and regions of Myanmar to study history or humanities at the University of Yangon.
On4September 2015, the Royal Norwegian embassy and the University of Yangon signed an official agreement regarding cooperation for the David Taw Scholarship Fund Programme 2015-2020. With addendum No. 1 of 27th November 2017, the scholarship period was extended to 2017-2022.
The scholarship fund is named after David Taw,adistinguished graduate of the University of Yangon, who showed an unwavering commitment to peace throughout his life.
SHARE SCHOLARSHIP BATCH 5
နိုင်ငံခြားပညာသင်လျှောက်ထားလိုသော ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ အထူးပြုဘာသာရပ်အသီးသီးမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အားလုံးသို့
FOR SHARE SCHOLARSHIP BATCH 5
လာမည့် (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ပညာသင်နှစ်တွင် တတိယနှစ်နှင့် အထက်သင်တန်းတက်မည့်သူများ (မဟာတန်းတက်မည့်သူများမပါ) လျှောက်ထားနိုင်သည်။
အသေးစိတ်ကို စာမေးပွဲများအပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၈) ရက်နေ့ ညနေ (၄) နာရီတွင် ရူဗဗေဒဌာန၊ ဆရာခ ခန်းမတွင် ရှင်းလင်းပြောကြားပါမည်။ (Share Platform တွင် Registration ကို (၂၈-၉-၂၀၁၈) မှ စတင်လုပ်ရမည်ဖြစ်၍ နယ်မှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာမေးပွဲဖြေပြီး အိမ်သို့ မပြန်မီ လာရောက်ကြရန်လိုပါသည်။)
အချိန်မီလာရောက်ကြပါရန်နှင့် Share Scholar ပြန်လာသူများလည်း မပျက်မကွက် တက်ရောက်၍ Juniors များကို ကူညီပေးရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
စာသင်နှစ်နီးကပ်လွန်း၍ ယခု Batch5တွင် EU တက္ကသိုလ်များမပါသေးပါ။ Intra ASEAN သာဖြစ်သည်။
Status of the SHARE Scholarship Programme Download Now
စဉ် ဘာသာရပ် စုစုပေါင်းဦးရေ
၁ မြန်မာစာ ၁၂၄
၂ မြန်မာမှုပညာ ၈
၃ အင်္ဂလိပ်စာ ၆၁
၄ ပထဝီဝင် ၁၅
၅ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုပညာ ၇၆
၆ သမိုင်း ၁၇
၇ ဒဿနိကဗေဒ ၃၀
၈ စိတ်ပညာ ၃၉
၉ ဥပဒေပညာ ၁၂၂
၁၀ အရှေ့တိုင်းပညာ ၁၅
၁၁ နိုင်ငံတကာ ၁၂၀
၁၂ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ၆၈
၁၃ မနုဿဗေဒ ၁၉
၁၄ ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ ၅၃
၁၅ စာကြည့်တိုက်နှင့်သုတပညာ ၅၀
၁၆ ဓာတုဗေဒ ၁၃၀
၁၇ ဇီဝဓာတုဗေဒ ၇၀
၁၈ ရူပဗေဒ ၁၁၃
၁၉ သင်္ချာ ၁၃၀
၂၀ သတ္တဗေဒ ၁၃၀
၂၁ ငါးလုပ်ငန်း ၄၇
၂၂ ရုက္ခဗေဒ ၁၁၈
၂၃ အဏုဇီဝ ၆၅
၂၄ ဘူမိဗေဒ ၁၃၉
၂၅ ကုန်ထုတ်ဓာတုဗေဒ ၁၁၀
၂၆ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာ ၉၃
တက္ကသိုလ် - ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်
အထူးပြုဘာသာ - ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာ
ဦးရေ ( ၉၃ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
၁ ဆဒဂ ၃၆၇ မောင်လွင်ဟန်မင်း
၂ ဆဗဟ ၁၃၂ မောင်ကောင်းခန့်ဇော်
၃ မလ ၉၅၃ မောင်ဝေယံမိုးမြင့်လွင်
၄ အဖ ၄၇ မလှယမင်းဦး